Caalamka Online » WAR CUSUB: Somaliland oo Amarkii Itoobiya Iska Indha tirtay iyo Ciidankeeda Oo hada ku dhow Garoowe lana wareegay deegaano hoostaga Magaalada & Dagaalkii ugu cuslaa oo………
WAR CUSUB: Somaliland oo Amarkii Itoobiya Iska Indha tirtay iyo Ciidankeeda Oo hada ku dhow Garoowe lana wareegay deegaano hoostaga Magaalada & Dagaalkii ugu cuslaa oo………
Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee caasimada Maamulka Puntland ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Somaliland ay hada la wareegeen deegaano dhowr ah oo hoostaga magaalada Caasimada u ah Maamulkaas ee Garoowe.
Ciidamadani oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la wareegay deegaanada ay kamid yihiin Boocame, God Qaboobe iyo deegaano dhanka waqooyiga ka xiga magaalada Garoowe oo qaarkood u jiraan ilaa 40 KM.
Ciidamadani oo ruqaansanaya marba marka kasii dambaysa ayaan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada Puntland, waxaana xaalada magaalada Garoowe ay xiligani tahay mid kacsan.
Ciidamo ka tirsan Maamulka Puntland iyo gaadiid dagaal oo aad u tira badan ayaa iyagu haatan gaadhay deegaanada ay fadhiisimada cusub ka samaysteen ciidamada maamulka Somaliland kuwaas oo iyagu kulaalaya hada caasimada Puntland.
Madaxweynaha Maamulka Puntland oo ayaa la sheegay in uu amray ciidankiisa in uu faray habeenkii xalay ahayd in aanu wax dagaal ah qaadin ciidamada Puntland balse ay iska caabiyaan ciidamada maamulka Somaliland ee duulaanka soo qaaday.
Xalay aayayahayd markii Saraakiil ka tirsan madaxtooyada Maamulka Puntland ayaa Noo sheegay in Itoobiya ay amartay in la jiniyo dagaalka ka socda Gobalka Sool waxaasa muuqata in Somaliland ay is diiday, taas oo ka dhigan farsamo cusub oo lagu qarinayo wararka sidahoose uga soo dhex dusay.
sida aan idiin balan qaadnay waxaan idiin soo gudbin doonaa Xogta rasmiga ah ee wararka ku aadan qaska Itoobiya ka wado Gobalka Sool,